Haddii aad raadineyso sawirro tayo sare leh oo bilaash ah, Glaze ayaa xalka ah Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Sawirro, Khayraadka, dhowr
Sawiradu sifiican ayey ula socdaan boggaga internetka qaarkood iyo Glaze waa midka kuu yimaada gargaarkaaga si aad ugu hesho bilaash. Keyd cusub oo leh sawirro tayo leh si maanta laga bilaabo aad ugu haysato waxyaabaha aad ugu jeceshahay.
Glaze wuxuu awood u leeyahay degelkiisa inuu noqdo mid aan la koobi karayn, in kastoo uu ku eg yahay, ilaha kheyraadka laga bilaabo maanta waxaad u baahan doontaa inaad ka tagto bogagga degitaanka la mar de chulas ama aad siiso taabashadaas gaarka ah. si aad u soo baxdo oo aad ku dhex gelisay e-meheraddaada si aad ugu soo jiidato taageerayaasha joornaalkaaga.
Glaze, oo laga soo qaatay boggiisa weyn ama bogga hore, wuxuu kuu oggolaanayaa inaad sahamiso inta u dhexeysa qaybaha kala duwan sida dukaamada iyo ganacsiyada, wada shaqeynta, meelaha, tikniyoolajiyadda, safarka, caafimaadka ... iyo qaar kaloo badan.
Xaqiiqdii, mid ka mid ah wajiyada ugu fiican waa farshaxanka muuqaalka mid kasta oo ka mid ah sawiradaas taasna waxaa lagu kala saaraa inay tahay mid aad u fiican. Taasi waa, iyagu maahan shaqada hiwaayadda, laakiin waa xirfadlayaal dhab ah iyo in ay kaamil noqon doonaan, illaa inta aad uga isticmaaleyso meesha saxda ah iyo waqtiga saxda ah.
Waxay u badan yihiin midabbo fidsan, in kasta oo nidaamka midabkoodu aad u muuqdo. Taasi waa midabada aasaasiga ah ayaa badan sidaa darteed xitaa waad abuuri kartaa koonto oo waad geli kartaa. Waxay sidoo kale leedahay badhan si ay uga qayb qaadato farshaxankaaga oo markaa naftaada u sheegto.
Markaad aado sawir si aad u soo dejiso, waxaad haysataa laba ikhtiyaar: soo dejiso oo dhammaystiran adigoo bixinaya qaddar yuuro ah ama bilaash ah, taasina waxay leedahay astaan ​​loo baahan yahay naqshadeeyaha. Si kale haddii loo dhigo, haddii aad magaca fannaanka geliso websaydhka, waad u isticmaali kartaa sagxaddaas, waad u isticmaali kartaa iyaga oo aan wax kharash ah ku bixin
Glaze waa bakhaar weyn oo aan ku aragno sawirro tayo sare leh waxayna kuu adeegi doontaa dhammaan noocyada shaqooyinka. Ha moogaan keyd kale oo loo yaqaan FreebiesByPeople.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Glaze waa bakhaar weyn oo cusub oo sawiro bilaash ah oo aadan seegi karin